Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » आफू टन्न खाएर डा केसीलाई भोकै राख्ने कांग्रेसको कुनै एजेण्डा छ र?
आफू टन्न खाएर डा केसीलाई भोकै राख्ने कांग्रेसको कुनै एजेण्डा छ र?
कांग्रेसको केही पनि एजेण्डा नै छैन । आफू भात खाएर गोविन्द केसीलाई भोकै राखिदिनुभयो । दुःख दिनुभयो । आखिरमा पानीको फोकाजस्तो फुटेर गयो । अवोध वालिका निर्मला पन्त मारिएको कुरालाई उठाउनुभयो । यसको पनि आफ्ना पाटाहरु आउलान् । टुङ्गोमा पुग्छ । जे विषय समाउनुभएको छ त्यो विषय नै छैन । विपक्षीमा हुँदा खुट्टा बजाएर सडकमा दौडिनुबाहेक अरु के काम छ र रु